Igumbi eliphindwe kabili endlini ehlukanisiwe eduze nolwandle nesikhumulo sezindiza
Sithanda ukwabelana ngekhaya lethu nezivakashi. Singumbhangqwana omuhle othanda ukuhlela engadini, ukunakekela amadada engadini, ukuhamba ngesikebhe nempilo yangaphandle. Njengesivakashi esikanye nathi, uzibeka engcupheni yokumenywa ezidlweni zakusihlwa zomndeni, ukusebenza engadini, uhambo lokudoba kanye nohambo lwesikebhe. Kodwa kuvunyelwe ngokuphelele ukuthi cha ngiyabonga bese ubuyela ekamelweni lakho ngokuthula nangokuthula uma uthanda. Uma ufuna ukuzwa ukuthi kunjani ukuhlala endaweni eseduze nolwandle ngaphandle kwaseBergen, futhi ufuna ukusazi, bhuka lapha
Sawubona, wamukelekile kithi. Singu-Eivind kanye namaNkosana. Sihlala sobabili sihlala lana espedalen siqasha 3 bedrooms endlini. Nathi ufika ekamelweni elilungisiwe, elihlanjululwe futhi liwashiwe, futhi linombhede osanda kwenziwa namathawula endlaliwe. Sihlanganyela amanye amagumbi endlini, ikhishi, igumbi lokuhlala, amagumbi okugeza angu-2 kanye nephasishi. Nakhu nje ukuze bazinikeze ukudla kwasekuseni nekhofi kanye netiye ekhishini. Siyajabula ukusiza ngamathiphu mayelana nezinto ezibukwayo nokuzizwisa e-Bergen nasezindaweni ezizungezile. Sihlale sinezincwajana kanye nolwazi lwezivakashi endlini ezingatholwa yizivakashi. Le ndawo iyindawo ethokomele futhi yasemakhaya enezindlu ezihlakazekile. Sithanda ukulima futhi sinamadada engadini. Wamukelekile ukuthi ubambe iqhaza ekwenzeni izingadi uma kuthakasela. Siyajabula ukwabelana ngolwazi namathiphu mayelana nokunakekelwa kwengadi futhi sijabulela nokwamukela amathiphu avela kubavakashi bethu.
Indawo enhle eseduze nolwandle kanye neMariholmen lapho kunamathuba okuqwala izintaba nezindawo zokugeza olwandle.
Siyatholakala inqobo nje uma singekho emsebenzini. Umnyango wangaphambili unokhiye wekhodi, ngakho-ke awudingi ukuhamba nokhiye. Ikhodi yomnyango inikezwa lapho ufika.